इन्स्टाग्राम फोटोहरू कहाँ बचत गरिएको छ 🥇 फॉलोअर्स ▷ 🥇
जहाँ इन्स्टाग्राम फोटोहरू बचत गरिएको छ
इन्स्टाग्राम इन्टरनेटको साथ सँगै बढ्न जारी छ। आज यो एक सबै भन्दा धेरै डाउनलोड गरिएका अनुप्रयोगहरू, साथै सबैभन्दा धेरै खोजी गरिएको र प्रसिद्ध सामाजिक नेटवर्कहरू मध्ये एक हो। इन्स्टाग्राम बिभिन्न प्रकारका लागि चिनिन्छ, शुरूमा यो यसको सम्पादन र यसको प्लेटफर्मबाट फोटोहरू लिने कार्यको लागि मात्र चिनिन्थ्यो। त्यसैले प्रयोगकर्ताले आफूले सम्पादन गरेको छविहरू प्रकाशित गर्न सक्षम भयो। यो परिवर्तन भएको छ, फेसबुक द्वारा इन्स्टाग्राम खरीद गरेदेखि, विभिन्न कार्यहरू प्लेटफर्ममा एकीकृत गरिएको छ।
इन्स्टाग्रामको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण भनेको हामीले पहिले नै भनेको नै छ, प्लेटफर्मबाट तपाईंको फोटोहरू निर्माण, सम्पादन र प्रकाशन गर्ने क्षमता। यी सबै इन्स्टाग्राम अनुप्रयोगबाट गर्न सकिन्छ किनभने यसका कम्प्युटरहरूको सेवाहरू अधिक सीमित भएका छन्। एक चीज जुन प्राय रुचि प्रयोगकर्ताहरू हुन् जहाँ फोटोहरू इंस्टाग्राममा बचत गरिएको छ.
मेरो ईस्टाग्राम फोटोहरू कहाँ भण्डार गरिएको छ?
इन्स्टाग्रामसँग भिन्न प्रकारका मोडहरू छन् जसमा तपाईंको प्रयोगकर्ताले आफ्ना फोटोहरू बचत गर्न सक्दछन्, तिनीहरू सबै फरक-फरक प्रसts्गहरूमा। एउटा अनुप्रयोग र फोटो प्लेटफर्म भएर फोटोहरू मुख्य पात्र हुन्। पहिले यो केवल कार्यक्षमता, फोटोहरू अपलोड र अपलोड गरिएको थियो। यो अझै पनी बाँकी छ, सामान्य रूपमा प्रकाशित गरिएको फोटोहरूको अतिरिक्त। इन्स्टाग्रामले अन्य सुविधाहरू थप गरिरहेको छ। इंस्टाग्राम कथाहरू जस्तै, जहाँ प्रयोगकर्ताले एक अवधिको साथ प्रकाशन गर्न सक्दछ।
जान्न जहाँ इन्स्टाग्राम फोटोहरू बचत गरिएको छ तपाईंले पहिले थाहा पाउनु पर्दछ तपाईंको रहस्यको प्रस first्ग के हो। इन्स्टाग्राममा तपाईले आफ्नो फोनमा फोटोहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ प्रकाशन पछि, तपाइँका कथाहरू, तेस्रो-पार्टी प्रकाशनहरू, तपाइँका आफ्नै प्रकाशनहरू बचत गर्नुहोस्, र तिनीहरूलाई अरू प्रयोगकर्ताहरूको नजरबाट स arch्ग्रह गरेर। अर्को हामी तपाईंलाई देखाउने छौं जहाँ इन्स्टाग्राम फोटोहरू बचत गरिएको छ.
तपाईंले प्रकाशित फोटोहरू कसरी बचत गरिन्छ
इन्स्टाग्राम उपभोक्ताहरूको मनपर्ने सुविधाहरूमध्ये एक भनेको उनीहरूको पहिले नै सम्पादन गरिएको फोटोहरू बचत गर्नु हो, उनीहरूको फोनमा सिधा प्रकाशित भए पछि। यो प्रकार्य धेरै सरल छ। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको + चिन्हको साथ वर्गमा थिच्नु पर्छ। जब तपाईंले यो गर्नुभयो, इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई फोटो खिच्न वा तपाईंको ग्यालरीबाट एउटा छनौट गर्न विकल्प दिनेछ। जस्तोसुकै तरीकाले तपाइँले छनौट गर्नुभयो, अनुप्रयोगले तपाइँको फोटोको लागि फिल्टरको श्रृंखला प्रदान गर्दछ। तपाईंले यसलाई सम्पादन गर्नुभयो र सार्वजनिक गर्नुभयो।
एकचोटि प्रकाशन भइसकेपछि तपाईले आफ्नो फोनको फोटो ग्यालरी प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र त्यहाँ तपाईंले सम्पादन गर्नुभएको फोटो र इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्नुहुनेछ।
तपाईंको कथाहरूको फोटोहरू कसरी बचत गर्ने
इन्स्टाग्राममा हाल तपाईंको कथाहरूको फोटोहरू बचत गर्न तीन भिन्न तरिकाहरू छन्। अर्को हामी तपाईंलाई उनीहरूको बचत गर्ने तरिका र कसरी देखाउँछौं जहाँ इन्स्टाग्राम फोटोहरू बचत गरिएको छ। बचतका यी तीन तरिकाहरू हुन्:
सम्पादित फोटोहरू बचत गर्नुहोस्
इंस्टाग्राम कथाहरू साथै सामान्य इन्स्टाग्राम पोष्टहरू। यसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई दुई विकल्प दिन्छ, पहिलो अनुप्रयोगबाट फोटो लिनु र त्यसपछि यसलाई सम्पादन र प्रकाशन गर्नु हो। दोस्रो विकल्प ग्यालरीबाट फोटो छनौट गर्नु हो, यसलाई सम्पादन गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई प्रकाशित गर्नुहोस्। अर्को चीज जुन सामान्य पोष्टहरूको समान हो भन्ने तथ्य यो हो कि फोटोहरू तपाईंको फोनमा बचत हुन्छ एकचोटि तपाईंले प्रकाशित गरे पछि।
यसका अतिरिक्त, इन्स्टाग्राम कथाहरू केवल फोटो सम्पादकको रूपमा कार्य गर्न सक्दछन्। यदि तपाईं पहिले नै सम्पादन गरिएको तस्बिर प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाई के गर्न सक्नुहुनेछ यो सिधा तपाईंको ग्यालरीमा बचत गर्नु हो, यो सेभ आइकन थिचेर गर्न सकिन्छ।
फोटोहरू एल्बममा बचत गर्नुहोस्
अघिल्लो बचत विकल्पको विपरीत, यस विकल्पमा फोटोहरू तपाईंको लागि मात्र बचत हुनेछैन। तर ती दृश्यहरु मा तपाइँको प्रोफाइल मा हुनेछ अनुयायीहरू वा अन्य इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरू। कथाहरू एल्बममा बचत गर्ने विकल्प अनुप्रयोग भित्र नयाँ छ। यो नयाँ कार्यक्षमताले प्रयोगकर्तालाई एल्बममा तिनीहरूको कथा सुरक्षित गर्न अनुमति दिन्छ। यी एल्बमहरू, बारीमा, प्रयोगकर्ता प्रोफाईलमा सबैलाई दृश्यात्मक हुन्छ, वर्णन मात्र तल।
अर्को नयाँ इन्स्टाग्राम अद्यावधिकले कहानी फोटोहरूलाई फाईलिंग क्याबिनेट भित्र पोष्ट पछि स्वचालित रूपमा बचत गर्न अनुमति दिन्छ। यो फाईलिंग क्याबिनेटमा तपाइँ कुनै अपवाद बिना सबै प्रकाशित कथाहरू फेला पार्नुहुनेछ।
जान्नको लागि जहाँ तपाईंले आफ्नो कथाहरूमा प्रकाशित गर्नुभएका इन्स्टाग्राम फोटोहरू बचत हुन्छन्। तपाईले के गर्नुपर्दछ तपाईको प्रोफाइल प्रविष्ट गर्नुहोस् र मेनुको माथि अवस्थित घडी आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यो तपाईको मोबाईल उपकरणको प्रणालीमा देब्रे वा दायाँमा हुन सक्छ।
जहाँ सम्पादित फोटोहरू बचत गरिएको छ
फोटोहरूका लागि इन्स्टाग्राम सेभ विकल्पहरूको अर्को यसको प्रकाशन मेनूमा छ। जब तपाईं फोटो सम्पादन गर्नुहुन्छ, यो प्रकाशन मेनूमा सबै चीज र ट्वीकको साथ बचत गरिएको छ, केवल प्रकाशित नगरिकन नै। यो ताकि प्रयोगकर्ता पहिले नै सम्पादन गरिएको फोटो अपलोड गर्न सक्षम हुनेछ। यो इरेजर जस्तै हो। फोटो, यो ईन्स्ट्राम भित्र भण्डार गरिएको छ भने पनि, इन्स्टग्राम कथाहरू भन्दा भिन्न, फोन भित्र भण्डारण गर्न सकिदैन। किनकि यो फोटो प्रकाशित गरेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि प्रयोगकर्ताले आफ्नो ईन्स्टग्राममा लग अफ गर्दछ भने, सम्पादन गरिएको फोटो वा ड्राफ्टहरू छोडिनेछन्।
अन्य प्रयोगकर्ताहरूबाट पोष्टहरू कसरी बचत गर्ने
पहिले अन्य प्रयोगकर्ताहरूको फोटोहरू बचत गर्ने एक मात्र तरिका स्क्रीनशट बनाएर थियो। अब प्रयोगकर्तासँग विशेष दृश्यका लागि अन्य व्यक्तिहरूको पोष्टहरू उनीहरूको प्रोफाइलमा बचत गर्ने अवसर छ। इन्स्टाग्राम सेभ विकल्पले तपाईका आफ्नै प्रकाशन र अन्यको लागि दुबै काम गर्दछ। बचत गरिएका तस्बिरहरू प्रयोगकर्तामा मात्र देखिन्छन् जसले बचत कार्य गरे।
यदि तपाईं आफ्नै प्रकाशन र अन्य प्रयोगकर्ताहरूको दुबै बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले के गर्नुपर्दछ निम्न छ:
तपाईंले बचत गर्न चाहानु भएको पोष्ट फेला पार्नुहोस्।
नयाँ पोस्ट गर्नुहोस् जुन प्रत्येक पोष्टको दाहिने तिर देखा पर्दछ, प्रत्यक्ष इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष आईकनको छेउमा।
एकचोटि तपाईंले आइकन फेला पार्नुभयो तपाईंले यसलाई थिच्नु पर्छ। यससँग प्रकाशन तपाईंको प्रोफाईलमा भण्डार गरिएको छ, केवल तपाईंको दृश्यमा।
जहाँ सुरक्षित पोष्टहरू छन्
जान्न जहाँ इन्स्टाग्राम फोटोहरू बचत गरिएको छ, तपाईंले निम्न चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ:
इन्स्टग्राम अनुप्रयोग वा कम्प्युटरबाट आधिकारिक पृष्ठ प्रविष्ट गर्नुहोस्। तपाईको खातामा लगईन गर्नुहोस्।
तपाइँको प्रोफाइल मा जानुहोस्।
फोटो लेबलको आइकनको साथ, बचत गरिएका प्रकाशनहरूको आइकन देखा पर्नेछ। तपाईंले यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। तपाईंले बचत गर्नुभएको फोटोहरू तुरून्त प्रदर्शित हुनेछ।
यस कार्यको लागि फेला पार्न सकिने केवल नकारात्मक यो सीमित छ। किनकि प्रकाशनहरू बचत गरिएको छ भन्ने तथ्यको बाबजुद, तपाईं मात्र तिनीहरूलाई इन्स्टाग्राममा लग ईन गर्न पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको मोबाइल उपकरणमा बचत गरिएको छैन।
फोटो बचत गर्न स्क्रिनशट?
इन्स्टाग्रामको शुरुआतमा यसका प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूले अधिक मन पराउने प्रकाशनहरूको स्क्रीनशट लिन सक्दछन्। त्यसपछि, को साथ संग Instagram Stories प्लेटफर्ममा, प्रयोगकर्ताहरूले त्यस्तै गर्न जारी राखे। यो कथाहरूका लागि परिवर्तन भएको छ किनकि इन्स्टाग्रामले यसको नयाँ परिमार्जन कार्यान्वयन गर्‍यो। भर्खरैका वर्षहरूमा सबैभन्दा हलचलको कारण परिवर्तन यो स्क्रीनशट चेतावनी हो।
स्क्रिनशट चेतावनी के हो? यो सजिलो छ, अब इंस्टाग्राम अनुप्रयोगको प्रयोगकर्ताले प्रत्येक चोटि कसैले तिनीहरूको कथा लिने सूचना प्राप्त गर्दछ। यो यद्यपि यो प्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी छ, किनभने उसलाई थाहा छ कि कसले आफ्ना प्रकाशनहरू बचत गर्दछ। अन्य भाग को लागी यो अधिक जटिल छ। प्रयोगकर्ताले छविलाई कब्जा गर्न सक्नेछन मालिकले यसलाई महसुस गरे बिना।
इन्स्टाग्राममा फोटो संग्रह गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राम भित्र फोटोहरू बचत गर्ने नयाँ तरिकाहरू मध्ये। यो ती फाइलहरू हुन्। अभिलेख राखिएका इंस्टाग्राम फोटोहरूको काम गर्ने तरिका धेरै सरल छ। जब प्रयोगकर्तासँग एउटा प्रकाशन छ कि तिनीहरू लज्जित छन् वा यो तिनीहरूको खाताको सौंदर्यशास्त्रमा फिट हुँदैन। यी केसहरूको लागि इन्स्टग्राम म संग्रह फोटाहरू डिजाइन गर्छु। प्रयोगकर्ताले प्रकाशन संग्रह गर्न सक्दछ, एकपटक यो प्रक्रिया सकिएपछि फोटोहरू इन्टग्राम भित्र बचत हुन्छन् तर प्रयोगकर्ताको प्रोफाइलबाट हटाइन्छन्।
अन्तमा, जुन तरीकाले तस्बिरहरू इन्स्टग्राम भित्र अभिलेख राखिन्छ यो निम्नानुसार छ:
तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको तपाईको आफ्नै वा कर्पोरेट खातामा लग ईन गर्नुहोस्।
तपाइँको प्रोफाइल मा जानुहोस्
एकचोटि तपाईंले इन्स्टाग्राममा लग इन गर्नुभयो भने, दोस्रो कुरा तपाईंले गर्नु पर्दछ तपाईंको प्रोफाइल प्रविष्ट गर्नुहोस्।
तपाईको प्रोफाइलमा तपाईले पाउनुहुनेछ कि शीर्षमा त्यहाँ घडी आइकन छ। यस प्रतिमा भित्र तपाईंले संग्रह गर्नु भएको प्रकाशनहरू बचत गरियो।
तपाईंले घडी आइकनमा क्लिक गर्नुपर्छ। भित्र तपाईले दुबै कथाहरू पाउनुहुनेछ जुन तपाईं अभिलेख राख्नुहुन्छ र प्रकाशनहरू।
अर्को नयाँ इन्स्टाग्राम अपडेटहरूले यसका प्रयोगकर्ताहरूलाई यसमा अभिलेख राखिएका प्रकाशनहरू अनरर्चि। गर्न अनुमति दिन्छ। जब प्रयोगकर्ताले यो कार्य गर्दछ छवि आफ्नो प्रोफाइलमा फर्कन्छ, यसको प्रकाशनको मितिमा, उस्तै मनपर्दो र टिप्पणीहरूको साथ, कुनै परिमार्जन वा परिवर्तन नगरीकन।
कसरी एक सजिलो र सरल खेल्न सिक्नुहोस्!
जान्नुहोस् कि कसरी जागिरको लागि लुगा लगाउन सजीलो सजिलो र सरल!